Al-Shabaab oo La Wareegay Degmo Ka Tirsan Kenya. – Shabakadda Amiirnuur
December 30, 2017 4:36 pm by admin Views: 106
Wararka ka imaanaya degmada Ijaara oo kamid ah Kenya ayaa sheega in ciidamada Xarakada Al-Shabaab ay habeenkii xalay ay halkaasi ka geysteen khasaarooyin culus kadib markii ay la wareegeen gacan ku heynteeda iyo xarumaha muhimka ah ee dowladda.
Askartii dowladda Kenya ee joogay degmada ayaa cagaha wax ka dayay markii uu dagaalku billowday sida ay shaaciyeen warbaahinta gudaha dalka Kenya waxaana ay tani Al-Shabaab u suura galisay iney si buuxda ula wareegaan magaalada.War rasmi ah oo kasoo baxay Xarakada Al-Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in ay askartoodu gacanta ku dhigeen magaalada ayna furteen gaari kooyaal ah oo ciidamada Kenya uga carareen gudaha magaalada.
“Mujaahidiintu howlgal ayay ka fuliyeen degmada Ijaara ilaah fadligiis waxaa usuurta gashay in ay si buuxda ula wareegaan magaalada halkaasna waxaa isga firxaday cadawga Nasaarada Kenya oo runtii ubabac dhigi waayay weerarka Mujaahidiinta” ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Askarta Al-Shabaab ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen saldhigga Booliska Ijaara, xarunta dhismaha shirkadda Safaaricom iyo xarunta Bankiga dowladda iyo meelo kale.
Haddaba dhacdada kadib waxaa meel fagaare ah la isugu keenay bulshada magaalada kuwaasoo ay la hadleen saraakiil ka tirsan Al-Shabaab. Waxaa dad weynaha loo sheegay iney ka fogaadaan wax yaabaha dhaqan xumada ah ee diinta islaamka liddiga ku ah iyada oo looga digay iney gacan saar ama wada shaqeyn la yeeshaan dowladda Uhuru.
Ugu dambeyntii baraha bulshada ayaa waxaa lasoo dhigay muuqaalo muujinaya xarumaha degmada Ijaara ee ay gubeen ciidamada Al-Shabaab kuwaasoo ay kamid yihiin dhismayaal ganacsi oo ay leeyihiin dad Kiristan Kenyaati ah.
Kenya horey u heysatay dhul Soomaaliyeed ayaa sannadkii 2011 kii qabsatay magaalooyin iyo degaano ka tirsan gobolada Gedo iyo Jubooyinka iyadoo dadka muslimiinta ah u geysatay illaa iyo haddana u geysata gumaad, taasoo ay usii dheer tahay iney si gaar ah dhul boob ugu heyso degmada Beledxaawo oo xad beenaad la wadaagta.